Umveliso woluvo lwee-AFE IR, abaxhasi-abavelisi baseChina be-AFE
Indibaniselwano ye-ASIC AFE yeThermopile IR Isinxibelelanisi sovavanyo lokujonga ubushushu kwiThemometha STP10DF35G1
I-STP10DF35G1 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. I-chip ye-ASIC AFE (i-Analog Front End) idityaniswe ne-sensor ye-thermopile, ebonelela nge-1000 inzuzo yesiphumo esincinci sevolopile sensor. Igalelo le-voltage ekhutshwayo yongezwa kwigalelo lenzwa. Umbane wokuphuma kwoluvo unokuguqulwa ngokuthe ngqo yi-ADC, ephelisa ngokuthe ngqo iZero-Drift amplifier kunye neDC-DC yesekethe. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-Analog Front Isiphelo se-Infrared Thermopile esingadibaniyo neSensor Sensor STP10DF55G1
I-STP10DF55G1 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. I-chip ye-ASIC AFE (i-Analog Front End) idityaniswe ne-sensor ye-thermopile, ebonelela nge-1000 inzuzo yesiphumo esincinci sevolopile sensor. Igalelo le-voltage ekhutshwayo yongezwa kwigalelo lenzwa. Umbane wokuphuma kwoluvo unokuguqulwa ngokuthe ngqo yi-ADC, ephelisa ngokuthe ngqo iZero-Drift amplifier kunye neDC-DC yesekethe. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-ASIC edityanisiweyo ye-AFE ye-Infrared Sensor Thermopile yokuNxibelelana kobushushu ngokulinganisa i-STP11DF55G1
I-STP11DF55G1 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. I-5 ~ 14 um band yokupasa lokucoca ulwelo phambi kwenzwa lenza isixhobo sibuthathaka kubushushu obuphezulu ukuya kuthi ga kwi-1500 ° C. I-chip ye-ASIC AFE (i-Analog Front End) idityaniswe ne-sensor ye-thermopile, ebonelela nge-1000 okanye i-2000 inzuzo yesiphumo esincinci sevolopile sensor. Igalelo le-voltage ekhutshwayo yongezwa kwigalelo lenzwa. Umbane wokuphuma kwoluvo unokuguqulwa ngokuthe ngqo yi-ADC, ephelisa ngokuthe ngqo iZero-Drift amplifier kunye neDC-DC yesekethe. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-AFE yokudibanisa okungafunekiyo kobushushu kwi-Pyrometry Thermometer Thermopile Sensor STP11DF85G1
I-STP11DF85G1 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Isihluzi se-8 ~ 14 um band yokupasa phambi kwenzwa yenza ukuba isixhobo sibuthathaka kubushushu obuphezulu ukuya kuthi ga kwi-1500 ° C. I-chip ye-ASIC AFE (i-Analog Front End) idityaniswe ne-sensor ye-thermopile, ebonelela nge-1000 okanye i-2000 inzuzo yesiphumo esincinci sevolopile sensor. Igalelo le-voltage ekhutshwayo yongezwa kwigalelo lenzwa. Umbane wokuphuma kwoluvo unokuguqulwa ngokuthe ngqo yi-ADC, ephelisa ngokuthe ngqo iZero-Drift amplifier kunye neDC-DC yesekethe. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
Ubushushu bePyrometer yoBushushu boMlinganiso woQhagamshelo lwe-infrared Thermopile Sensor STP11DF89G1
I-STP11DF89G1 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Isihluzi se-8 ~ 14 um band yokupasa phambi kwenzwa yenza ukuba isixhobo sibuthathaka kubushushu obuphezulu ukuya kuthi ga kwi-1500 ° C. I-chip ye-ASIC AFE (i-Analog Front End) idityaniswe ne-sensor ye-thermopile, ebonelela nge-1000 okanye i-2000 inzuzo yesiphumo esincinci sevolopile sensor. Igalelo le-voltage ekhutshwayo yongezwa kwigalelo lenzwa. Umbane wokuphuma kwoluvo unokuguqulwa ngokuthe ngqo yi-ADC, ephelisa ngokuthe ngqo iZero-Drift amplifier kunye neDC-DC yesekethe. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.